Sawirro: Axmed Madoobe oo kusoo Biiray Wadahadalkii ONLF iyo Itoobiya iyo Wararkii ugu dambeeyay (Warbixin) | Kalshaale
Sawirro: Axmed Madoobe oo kusoo Biiray Wadahadalkii ONLF iyo Itoobiya iyo Wararkii ugu dambeeyay (Warbixin)
Feb 13, 2018 - 23 Aragtiyood
Nairobi (Kalshaale) Dadaalo Nabadeed kuwii ugu Mustaqbalka Wanaagsanaa oo xal kam danbays ah lagaga gaarayo Colaad mudo dheer kasocotay Gobolka Geeska Africa ayaa kasocda Magaalada Nairobi, Waa hadii ay Guulaystaan.
Wada hadaladan oo mudo soo socday ayaa lagu gaari doona Heshiis kama danbays ah oo lagu soo afjarayo colaada mudada u dhaxaysay Dawladda Itoobiya iyo Ururka ONLF.
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam wuxuu kamid yahay Madaxda qaybta ka ah dhexdhexaadinta labada dhinac wuxuuna saacadahii lasoo dhaafay la kulmay ergooyinka labada dhinac kala matalaya.
Bulshada uu saamaynta ku leeyahay Wahadalka labada dhinac u dhexeeya iyo Guud ahaanba Soomaalida ayaa isha ku haysta waxyaabaha kasoo bixi doona Shirakaasi.
Heshiiya ogaadeenoow,oo gacmaha is qabbsada,waa noo farxad.
Dhinaca DDS, waxan leeyahay ha xaqirina
Xaqa halgamayaasha onlf.
Way u dhinteen ciidda,amxaarkana way tuseen wuxuu yahay.
ONLF huu haa iyo Somali weyn baa been loogu sheegay. Beentje 1977 haday hada ka tooseen waa Guul ONLF.
Dalkooda Itoobiya waa ku taageerayaa inay dhig iyo dheefba la qaybsadaan.
Halkii dhiiga BIYAA dureera *HALKI maskaxdana XAYR BAA fadhida. Aqli ha weheshan ee abidkaaba ku abaarso AXMAAR WAA WALAALKAY *SOMALINA WAA CADAWGAY, waxgaradsana ILAAHAY SWT haku nabad yeelo. DAL MIDA ama DALMIDA. WBT
Dhig iyo dheef kula noolaadaan Kuna heshiiyaan.
Nabadaa leh naas la nuugo.
Ogaadeen ma wexey go.aansadeen in ay gumeystaha madoow isu wada dhibaan
Anigoo og in ay jab weyn ku aheyd dhiibitaankii qalbi dhagax hadana waa wax laga xumaado in ay isu wada dhibaan gumeystaha madoow ee cadowga ah
Aduunyooy xaalka ba.a
Hadii dhulmahanye Idoor laangaab isu dhiibay dee maxaa Ogadeen u diday in ay Iyana dowladooda Itoobiya isu dhiibaan ?
Itobiya guumeeysi uma arko . Marka nin Ogadeen ah Muqdisho marti loo arko Addis ababa muwaadin baa loo arkaa .Fuck Somaliwayn
garqaad tuug tuug dhalay oo xaasid aha tahay. kala qaybsananta iyo colaada ogaden dadka ku raaxaysanayaad tahay. orod xabashisu wardhiigley iyo jowhar ay joogaane waxka qaboo xita dhagax kutuur xabad maba awoodide.
waa yuhuuuud xaasid aha ninki midnimada ogaden ka naxa maanta. madaxdii geeska africa way israacday somalina waxay yihin ban tusaynaaa mardhow dacayda dhulka wanu ugu xidhi.
Acc ogadeen ayahiina katashada xabashadina wax indhamo malle waa cadow intii laindhahay baahadane lookalo dhuuntaa amxarada gaas farmajo madobe muse biixi shariif dhaman adis udhuntaan maxaa kaligiin somalinimo I diin saaray agah
Ma waxaad II cayneee gumeystaha madoow aan hoos seexdee faraha iiga qaad kkkkkkkk
Waxaan hadalka u wadaa dadka wanaagsan oo damiirka leh. Quti marwalbo waa Quti
Garqaad asc kkkķk a same boy daa rotigisa dhinacisa maraqa haku Daarte asne
Amaal salaan sare wadaadda golaha
Absame boy wuxuu u haystaa itoobiyaanku in ay raali ka noqonaayo hadii reerkiisu la heshiiyo maba ogo hamiga itoobiya in uu yahay in ay Somali kala qeybiyaan ee qabiil qabiil ugu sheqeystaan in uu yahay
Amaal hadiiba caasimadii 5 somaliyeed qalbi dhagax diyaarad looga saaray adis lama yabaayo wiilka yar hadalkiisa
Faarax macalin ayaan ka hayaa adigoo boqol maalmood soonaa baqti ku afur waa dhibaato
Onlf hadaad xitaa xoriyad u dagaalaysaan waa in loo dhan, hal meel la yahay.
Aan anagu somali ahaan aan isdilno, weliba Ogadeen ahaan aqli maaha!
Waa cawaanimo civil war.
Viva Ogadenia 🇸🇴
Garqaad waanka Qaday salamta mid lamid ah IGA hano wadad majirte allow n.a. aastur waa sidaas itobiyo kiskis bey somalida dhulkisa iyo dadkeda iyi maskax ahaan ola waregtay
bal dadkan daya isla qumanidooda. ogadenow itobiya kaligin la dagalama si an idin qaqabanonoon idiin iibsano caqli an ahayn ma waydeen. idinkuba itobiya wataase la dagalama meel somali jogto oysan itobiyanl haysanin maanta ilen majirte.
Axmed Cadde Garmadoobe sidii loo xireyba wuxuu ahaa Rati Gumeystaha u xamaalo,
Kuukuuyo ayaa ku waardiyeeyo Kismaayo oo ah dhulkii Xorta ahaa markaas ayaad ka sugeysaan inuu Xoreeyo Jigjiga oo Tigree u xadreeyo.
Heshiiskan beenaadka ah hadduu dhaco waa khiyaanadii qarnigan oo dhulkii Soomaaliyeed ee gumeystuhu bixiyay ama Ogadeen lagu xabashiyeeynayo.
Jabhad ama jabhado cusub unbaa samaysmiye cid damiir leh oo yeelaysa ma lahan.
Macaan jecesha halkaa ku shirtay qaddiyaddan looma daba fadhiisanayo, lagamana yeeli doono isu dhiibidda xabashida.
Bal yaabka isu dhiibka xabashida ayeey leeyihiin waa guul.
Bro maashaa Allah. Absame boy waa nijaas xabashi ah af Soomaaligana bartay waana kuwa kabaha xabashida u caseeya.
Warkiisa ka soo qaad maleh waa sida ina ileygii ku dul ooyahay qabrigii ahlul naarkii Zinnaawi.
Axmad Madoobe sheekadiidiisu waa igu sawir iyo kaba leef Xabashi.
Waar madaxda Soomaaliya waa sheegad kulligood dilootay sumcaddii xumo iyo gaalo jcayl.
Ninkaan baa ku leh fatxul majiid baa la ii soo mariyay alwalaa walbaraana weli waxaan ahay waa sida Cali Caariif
Down all Axmaara lovers
ASC ITOOBIYA MAANTA MAALIN AY KA JILICSANTAY MA JIRTO MAALIN LAYS DHIIBONA MA AHAYN SABABTOO AH WAXA KACSAN O DUURKA KU JIRRA AMHAARA OROMIYA OO AH LABADA QOMIYADOOD EE UGU BADAN ITOOBIYA SOMALIDUNA WAA TASADEXAAD MICNAHAYGU WAXAWEEYE 3 SADEXDA QOMIYADOOD EE ITOOBIYA U BADAN HADII AY JABHAD SAMAYSTAAN OO MIDOBAAN ITOOBIYA WAAY U DHAMAATAY LAKIIN MAXAY KUUGUTALLAA ITOOBIYA WAA XARIIFAD XAGA SIYASADANA WAA KU HORAYSAA ARINKII IYO QARANJABKII WAA KA HORTAGTAY SOMALINA WAA LA HESHISAY AMXAAR IYO OROMIYA WAXAY KU TIDHIY HA DHAG DHAGAAGIN WBT
ANAGU HADII AANUNHAY SOMALILAND ITOOBIYA WAA NOO DHANTAA JABUUTI
SABABTOO AH JABUUTI WAKHTIGII AANU QAXAYNAY XADKA WAA NAGAXIDHATAY
ITOOBIYANA XADKA WAA NOO FURTAY
♡♡♡ MIDAKALLE YAA LA WAYDINAYAA OGADEENIYA OO U SAXEEXAY MINGISTE IN AY OGADENIYA TAHAY DHUL ITOOBIYAAN SOMALINA SHOQO KULAHAYN WAA KALIGII TALLIYII MACANGAGA AHAA EE SIYAAD BARE
BAL HADA MAGALADII CEERIGAABO WAXA LAGU SHEGAYAA BUUR DAHABEE WARKA I SII MISE WAXAADTAY QOLODAN DIINKA ERYANAYSA ADIGA SOO SOCO
Taliska Ethopia talo ayaa ku ciirsan.Oromadii o midaysan ayaa kacsan.Si aan laga filanayn aya u midaysanyihiin.
Ethopiyan waxay ka hortagayaan inay Olf hesho ama hogaan u noqoto mifnimo Somaliyeed oo u abaabulan sida Oromada.Inta aanay Jabhada Olf ama aanay Somalida Ethopia fahmin qaabkan cusub ee ay Oromadu u dagaalamayso ayaa laga sii hor degayaa.
Somalidu ama Olf casharo ayay ka baranayaan Oromada.Haday Somalidu qaataan nidaamkan Oromada ee wata banaan baxyada ee waliba dad ku ay midaysanyihiin Ethopiya halis ayay galaysaa.Markaa waa in heshiis been been ah lagu mashquuliyo Olf.Ethopia sidaa ayay dani uGu jirtaa.
Waxaase Jira inay Ethoya hali ku jirto ama ay gacanta Oromada galyso/
Somalida waa dad is wada lug gooynaya. Waa dad been isku sheegaya.
Kuwa Hawiyaha ah oo caqli yar, ayaa nagu wareeriyay Qalbidhagax, Qalbidhagax, iyaga oo hortooda lagu laaynaya dad uga sokeeya Qabligax, 28 sanno, oo eeysan af iyo adinba wax ka qaban. Sidoo kale, waxaa jirra dad beesha Ogaadeen ah, oo eey kuwaan Hawiyaha iyo qeeyb kaloo Daarood ah, iyo qeeyb kaloo Isaaq ah, eey jambal u tuuraan, iyaga oo xasidnimo katahay.
Adeerayaal, walaahi baan ku dhaartee aabaheey oo askir ahaa, ayaa Ethopia la dagaalamay Ethopia gudaheeda 1977 kii. Wax badan ayaana is badalay aduunka.
Caqli maahan, in Somalida iyo waliba dadka Ethopianka ah lagu dhameeyo caqli xummo iyo daanyeernimo.
Macno ma sameeyneeyso dhul ayeey naga heeystaan Ethopia iyo kenya, iyagada oo kuwii aan la’idinka heeysan, eey Somaliya isku dilayeen 28 sanno, iskuna eryanayeen.
Aduunka darbiyada iyo xaduudaha ayaa la burburinayaa, bani’aadamkana meehsa u roon, oo danta shaqsiyan ugu jirto ayuu aadayaa. Macno ma sameeyneeyso in dad Somaliyeed eey Kenya amaba Ethopia ka tirsanyahiin, iyo xaduud uu u xariiqay nin cadaan ah, oo xoogaa yar uun ka caqli badnaa daanyeerta Afrikaana qarnigii 18aad.
Dadka Afrikaanka iyo Somalida dhexdeedaba waa in eey nabad kuwada noolaadaan, kala ganacsadaan. Daanyeerta Somalidase iyaga oo dalkoodii burburiyay, jaad iyo qashinna loo keeno maalin kasta dowlad la’aan, amaba dowlad jilicsan darteed, maahan in lagu meereeyso Ethopia iyo Kenya.
ka shaqeeya dowladnimo, ugu yaraan ilaalisa, in dadkaan cawaanta ah ee cowska lacagta laga siinaya joojisa. Qamrada ayaa ka roon, jaad cows ah, oo wasaq iyo waxii soo guray xaar iyo malax gacmaha ku sitaan dadka cunaya. Daanyeero.
Ethopia iyo Kenya, waxaa Somalida uga darran iyadda dhexdeeda.